DAAWO+WARBIXIN: Garacad Magaalo mustaqbal weyn filanaysaa. -News and information about Somalia
Home Warkii DAAWO+WARBIXIN: Garacad Magaalo mustaqbal weyn filanaysaa.
Inna keen ku geeyee bariga fog ee gobolka Mudug, dacalka badweynta Hindiya, halkaa oo ay ku taallo magaalo mustaqbal weynleh. Goor fiidki ah oo aan qiyaasayo iney 8:00 fiidnimo ahayd ayaannu ka safarnay Garoowe, caasimadda Puntland, waxaannu la soconney labo gaari oo ah nooca Soomaalidu Laylada u taqaanno ah (Landcruiser), kuwaa oo mid-kiiba lix qof saaran tahay. Kooxda aan la socdey waxaannu ahayn shan afar-tood kursiga danbe saaran tahay, halka midka kale iyo dareewal-kuna gaariga xaggiisa hore saaran yihiin. Waxaannu doonaynaa inaan layl-ka oo dhan sii jibaaxno, dhul u qaybsan howd-ka gobolka Nugaal iyo cadduunka Mudug, waxaana aannu shidannay jiheeye innoo tilmaamaya halka aan ku jeedno, kaas oo sheegaya in Garacadda aannu u soconno innoo jirto 200 km.
Sheeko iyo heeso qaaci ah oo la isku jaaday ayaannu isku madadaalinaynaa si aannu isugu dhaafinno rafka jidka iyo ruxanka gaariga. Guuraha iyo jidka aannu ku soconno oo aannaan aqoon badan u lahayn awgeed labo mar ayaannu ka habownay dhabbada saxda ah, taas oo sababtay inaan labada marba ka laabannay meel aan wax-badan ka fogayn magaaladi aan fiidkii ka dhaqaaqnay ee Garoowe. Gaarigii kooxdayada kale oo naga danbeeyey ayaa intaan safarka ku jirney ciladi dhinaca Taangiga biyaha ka wajahdey, taas oo sababtay inuu meel dhexe inooga haro, hase yeeshe wuxuu markii danbe inoogu yimid Garacad. Xoogaaga habowga ah kadib qaaddirku waa uu nagu aaddiyey jidka toosan, waxaan rafka jafnaba waaberigii, 7:30 subaxnimo ayaannu galnay garoonka diyaaradaha macmal-ka ah ee Garacad, halkaas oo aannu ka bilownay howl-maalmeedka aannu u soconney.
Previous articleKASHIFAAD: Madaxweyne Farmaajo miyaa ka danbeeyay is-casilaadii Wasiir ku xigeenka C/kariin Dhalac..? -Akhriso
Next articleSAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo Oo La Kulmay Madaxda K/Galbeed Iyo Hirshabeelle
Guddoomiyaha Aqalka Sare Oo Dib Ugu Soo Laabtay Dalka